Killiney SS2 Mall: First time dining. No second time
Racist ex-actor Kyaw Thu should not be given the USA Democracy award
Janji Demokrasi: 10000 defy ban. Rais still counting
လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မစ္ဆရိယ (၅) မျိုး
Changing Malaysia's name,anew Jalur Gemilang and new NegaraKu
Posted: 01 Sep 2012 08:55 AM PDT
Food and drink below my expectation. I'm not choosy when it comes to food. So, if it's below my expectation, then you know how 'good' it is. ;)
Some cheap stuff found in the DIY store at SS2 Mall. RM1.80 for six tubes of super glue.
Posted: 01 Sep 2012 10:46 AM PDT
Clinton Virus: Reduces your hard drive to 6k, erases its memory, and swears it never infected your system.
Bureaucrat Virus: Divides your hard drive into hundreds of little units, each of which do practically nothing, but all of which claim to be the most important part of the computer.
Gallup Virus: 60% of the PCs infected will lose 38% of their data 14% of the time (plus or minusa3.5% margin of error.)
Warren Beatty Virus: Constantly tries to prove its virility by attaching itself to younger or newer files.
Posted: 01 Sep 2012 04:18 AM PDT
Posted: 01 Sep 2012 05:28 AM PDT
Posted: 01 Sep 2012 02:53 AM PDT
If Bigot Kyaw Thu is given Democracy awards, USA need to give Democracy awards to Ne Win, Saw Mg, Than Shwe, U Thein Sein, Khin Nyut etc….At least the persons I nominate are sincerely doing their job and their actions could generatealot of democrats in Burma. Kyaw Thu ISaHypocrite RACIST.
U Kyaw Thu…if you wish to deny, deny that you R notaracist. SHAME on U. You do not deserve the democracy award if you fail to deny or retract and apologize…
ကဲ… ကျော်သူတို့ လင်မယားပါ ပါလာပြီဆိုပဲ…
ရခိုင်ပြည်တွင် ဇွန်လက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်
ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံခြံစည်းရိုး၊ တံခါးများကျိုးပေါက်ခြင်းကို အခြေခံကာဖြစ်
ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူက သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ စစ်တွေမြို့ အင်းပေါက်ဝ ဟိုတယ်တွင် ဒေသခံနာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
" မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်တံခါးကျိုးပေါက်တယ်။ အရှေ့ဘက်ကလဲ ကျိုးပေါက်တယ်။ မြောက်ဘက်လဲ ကျိုးပေါက်နေတယ်။ နောက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရမယ့် အနေအထားမရှိအောင်ထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုရဲ့ ခြံစည်းရိုးကိုသတ်မှတ်ပြီး လုံခြုံမှုအပြည့်အ၀ ရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် " ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။အိမ်ထောင်စု တစ်ခုအတွင်းသို့ အပြင်မှ ဧည့်သည်တစ်ဦးဝင်လာကာ အိမ်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်သိမ်းချင်သောကိစ္စကို သူ့အနေနှင့် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံ၏စည်းကို ထိန်းသိမ်းရန် အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိကြောင်းကို အသင်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်တွင် အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားများကဲ့သို့ ဘာသာခြားတစ်ခု လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်၊ မိမိတို့ဘာသာ ပျောက်ကွယ်မသွားအောင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက တံတိုင်းကြီး တစ်ခုသဖွယ် ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်ပေးနေကြောင်းကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးဒေါ်ရွှေဇီးကွက်က တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
The 2012 Democracy Award
and featuring remarks by
Presentation, followed by light reception
United States Capitol, Room HC-5
(Please use south door entrance)
Posted: 01 Sep 2012 02:18 AM PDT
Posted: 01 Sep 2012 12:40 AM PDT
Despite being declared illegal and the Home Minister Hishammuddin Hussein predictingalow turnout,alarge yellow-clad crowd descended upon Dataran Merdeka last night for the 'Janji Demokrasi' (Promise of Democracy) rally.
မိမိပိုင်ဆိုင်ရာ နေရာဌာန၌ မိမိမှတစ်ပါး မည်သူ့ကိုမျှ မနေစေလိုခြင်း၊ တစ်နည်း မိမိရနေသော ဆောက်အဦးကောင်းမျိုးကို သူတစ်ပါး မရစေလိုခြင်း။ (ကိုယ်ကောင်းကောင်းရသလို သူများကို မရစေချင်တာမျိုး၊ ရသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မကျေမချမ်းဖြစ်နေတာမျိုး)
ရဟန်းဖြစ်လျှင် မိမိကို ကိုးကွယ်နေသော ဒကာ၊ ဒကာမများ အခြားရဟန်းကို မကိုးကွယ်စေလိုခြင်း၊ လူဖြစ်လျှင် မ်ိမိဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများက မိမိထက် အခြားသူများအား ပိုမိုချစ်ခင်သွားမည်ကုိ မလိုလားခြင်း။ (ကိုယ်နဲ့ ခင်နေတဲ့မိတ်ဆွေ သူများနဲ့ပိုခင်သွားမှာ စိုးရိမ်တာမျိုး)
စီးပွားလာဘ်လာဘ မိမိရသလို သူတစ်ပါး မရစေလိုခြင်း။ (ကိုယ့်ထက်သာနေတာကိုလည်း လက်မခံနိုင်ဘဲ မကျေနပ်တာ၊ အလိုမရှိတာ၊ မလိုလားတာမျိုး)
သူတစ်ပါး၏ လှပသော အဆင်းဂုဏ် မြင့်မြတ်သော အကျင့်ဂုဏ်ကို မိမိလည်း မချီးမွမ်းနိုင်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး ချီးမွမ်းသည်ကိုလည်း အလိုမရှိခြင်း။ (သူများရဲ့ ကောင်းဂုဏ်ကို မချီးမွမ်းနိုင်တာ၊ သူများပြောရင်လဲ မလိုလားပဲ မကောင်းလိုက်ပြောတာမျိူး)
(၅) ဓမ္မ စ္ဆရိယ
စာပေပရိယတ္တိနှင့် တရားအသိအမျိုးမျိုးကို မိမိ သိသလို သူတစ်ပါးအား မသိစေလိုခြင်း တို့ဖြစ်ကြလေသည်။ (ကိုယ်သိသလို သူများကို မသိစေချင်တာ၊ မတတ်စေချင်တာမျိုး)
ဒီ (၅)မျိုးကို လက်ခံထားရင် ကိုယ်တိုးတက်မယ့်ဂုဏ် မတိုးတက်ပါဘူး… ကိုယ်ရမယ့်ဟာတွေ ကိုယ်ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေဟာ လမ်းပိတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်.. ကိုယ်ပြောစကား ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကားက သြဇာအာဏာ မရှိဘူးတဲ့…. သူများနားမထောင်ဘူးပေါ့… ဖြစ်ရာဘဝကိုလိုက်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ရတယ်တဲ့… သူတစ်ပါးရဲ့ အကူအညီကိုလဲ မရတတ်ဘူးတဲ့…. အကုသိုလ်ကြီးလွန်းရင် အရမ်းသနားတတ်တဲ့သူ၊ အရမ်းပေးကမ်းတတ်တဲ့သူ၊ အရမ်းစာနာတတ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ရင်တောင် အဲ့ဒီလူအပေါ် သနားချင်စိတ်တွေ.. ပေးကမ်းချင်စိတ်တွေ.. စာနာချင်စိတ်တွေ…ကူညီချင်စိတ်တွေ ပျောက်သွားပါတယ်။
သူတစ်ပါးကြီးပွားပျော်ရွှင်တာကို၊ သူတစ်ပါးတို့ ချစ်ခင်ကြင်နာတာကို အန္တရယ်ပြုသည်အထိ ဝန်တိုခြင်း မစ္ဆရိယရှိသူအတွက် လက်ငင်းဆိုးကျိုး၊ သံသရာဆိုးကျိုးများကို သိလိုပါသည်ဟု မေးလျောက်ရာ ဗုဒ္ဓက မစ္ဆရိယသမားအတွက် လက်ငင်းဆိုးကျိုးကား သူတောင့်တသော အရာမှန်သမျှ ဘယ်တော့မှမရ။ ကူညီစောင့်မမည့်သူလည်း မရှိ။
သံသရာဆိုးကျိုးကား ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်စသော အပါယ်လေးဘုံသို့ ကျရောက်ရပြီး ထိုဘုံများမှလွတ်၍ လူ့ဘဝသို့ ရောက်ခဲ့လျှင် အဆင်းရဲဆုံးဘဝသို့ ရောက်ရသည်။ အမြဲလိုလို စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်နေရတတ်သည်။ ဝမ်းစာကို နဖူးကချွေး ခြေမကျသည်အထိ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရှာဖွေရသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့ပေသည်။
အိုဗုဓ္ဒဘာသာအား သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်တို့ဒီတရားတွေကိုယ် သင်တို့ သိပါ၏လော…..SOURCE FB of Mg Thit Sar
Posted: 31 Aug 2012 10:28 PM PDT
Are we still celebrating Merdeka?
I just wanna makeashort post. Its about Merdeka and the opposition.
Among the 150,000 people attending Merdeka Day celebration at the National Stadium last nite, I didn't see any Pakatan Rakyat's leaders. No Anwar Ibrahim, no Nik Aziz and Hadi Awang, and no Lim Kit Siang and Lim Guan Eng.
Mat Sabu was not anywhere near the stadium, and neither were Nurul Izzah, Azmin, Karpal (we must excuse him for being wheelchaired) and others.
I guess Malaysia has never been their country, and they never recognise Jalur Gemilang as the National Flag while NegaraKu is not the national anthem.
Oopss... maybe we can understand why were they absent. They are planning foranew name to replace Malaysia and composinganew song for NegaraKu. As for Jalur Gemilang, they already gotareplacement (picture).
Its saddening to note how everything about Malaysia is despicable to Pakatan Rakyat. The greed for political power is fast turning them intoagroup fascist. How else to describe them!
Anwar, Hadi and Kit Siang, who used to join similar celebrations are now turning their back on their own country, their 'tanah tumpah darahku'. They are not only against Barisan Nasional, they are also against Malaysia.
And that's explains what took place at Dataran Merdeka and other venues on the eve of our 55th Merdeka Day.
I wonder what will happen to Malaysia if Pakatan Rakyat rules. New name, new flag andanew national anthem.
Posted: 31 Aug 2012 09:50 PM PDT
B Berbeza dengan sambutan ambang merdeka tahun-tahun sebelumnya, sambutan ambang merdeka 'Janji Demokrasi' yang diadakan di Dataran Merdeka malam tadi turut disertai oleh semua kaum dari pelbagai peringkat umur.
"Sebab itulah bila hari merdeka, selalunya berkisar tentang pemimpin Umno sahaja.
"Kali ini lain, saya dan kawan-kawan betul-betul dapat rasakan semangat kemerdekaan negara Malaysia, bukan meraikan mana-mana parti politik," kata beliau sambil disokong oleh beberapa rakan beliau yang turut serta meraikan sambutan ambang kemerdekaan malam tadi.
"Cina dan India bukan tidak sayangkan negara Malaysia, bukan tak mahu meraikan, tetapi mereka melihat sambutan anjuran kerajaan hanyalah acara memertabatkan Umno sebab itu malam ini kita lihat selain ramai Melayu, Cina dan India juga ramai dengan pelbagai lapisan umur.
"Jadi kita tak perlukan hiburan, bunga api dan sebagainya dengan semua datang tanpa di bayar.
"Saya dengar orang yang datang besok pagi ada hadiah kereta dan bermacam lagi.
"Malah bagi sesetengah kakitangan kerajaan mereka terpaksa hadir dan kita juga tahu berpuluh-puluh bas disediakan oleh kerajaan," kata Tunku Harmy ketika ditemui TVS malam tadi. -selangorku
August 31, 2012 • Gatestone Institute
Posted: 31 Aug 2012 07:25 PM PDT
Menurut kemaskini Twitter oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim, cermin bas tersebut telah dipecahkan dan cat merah disimbah pada bas tersebut. Insiden ini disyaki didalangi oleh samseng upahan.
Posted: 31 Aug 2012 03:30 PM PDT